मन्त्रालयले भन्याे, एक साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउनुपर्छ ! - नेपालबहस
मन्त्रालयले भन्याे, एक साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउनुपर्छ !
| १३:१३:४० मा प्रकाशित
२४ भदौ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप एक साता लम्ब्याउनु पर्ने बताएको छ । विगत तीन सातादेखि जारी लकडाउन आज राति १२ बजेदेखि सकिदै छ । अबको एक साता लकडाउन लम्ब्याए महामारी नियन्त्रण सहज हुने भन्दै मन्त्रालयले एक साता लम्ब्याउने सुझाव दिएको हो ।
दुई सय बढी एक्टिभ केस भएका ठाउँमा लकडाउन र पाँच सय बढी एक्टिभ केस भएका ठाउँमा कर्फ्यु नै लगाउने भन्ने स्वास्थ्यको मापदण्ड छ । उपत्यकामा अहिले यी दुवै मापदण्ड नाघेको छ । त्यसैले अहिले निषेधाज्ञा खोल्नु हुन्न मन्त्रालयले भनेकाे छ । उपत्यकामा अहिले पनि जोखिम नघटेको भन्दै जारी निषेधाज्ञालाई कम्तिमा एक साता निरन्तरता दिनुपर्ने मन्त्रालयले बताएकाे छ ।
मंगलबार बसेकाे उपत्यका नगरपालिका फोरमले बैठकले सीमाबाट प्रवेश गर्ने नाकामा कडाइ गर्ने र जनजीवन खुकुलो बनाउन पर्ने बताएको छ । तर कतिपय विज्ञहरुले भने निषेधाज्ञा मात्रै समाधान नभएको भन्दै विकल्प खोजेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।
गायिका देवीको ”मेरी आमा”मा रञ्जिताको अभिनय ८ मिनेट पहिले
नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, १२ उपसमूहकाे शेयर ओरोलो २२ मिनेट पहिले
शुक्रबार भारत र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता हुने २६ मिनेट पहिले